अण्डा न ल्याएको भन्दै श्रीमती पो इल ग इन ! – ramechhapkhabar.com
अण्डा न ल्याएको भन्दै श्रीमती पो इल ग इन !
यो दुनियामा वि चित्र घ टना खोज्न टा ढा जानु पर्दैन, छिमेकमै भ इरहन्छन् वि चि त्रका का ण्डहरु। हालै छिमेकी मुलुक भारतको उत्तरप्रदेशस्थित गोरखपुर जिल्लामा एउटा यस्तै वि चित्रको घ टना भएको छ। विवाहित महिलाहरु प रपुरुषसँग पो इल जा ने घ टनाहरु यदाकदा सुनिन्छन्। आफ्नो लोग्नेलाई छा डेर अर्को पुरुषसँग पो इल जाने कुरा वा स्तवमा कुनै सा मान्य कुरा होइन। पोइल जानुका कुनै खास खास हुन्छन्। तर कहिलेकाहीँ एउटा अण्डासमेत पो इल जानुको कारण ब न्दो रहेछ।
हो, लोग्नेले अण्डा न ल्याइदिएको नि हुँमा एकजना महिला पो इल गएकी छिन्। गोरखपुरको क्याम्पियरगञ्ज गाउँमा बस्ने ती महिला ४ महिना पहिले पनि प्रे मीसँग भा गेर केही दिनपछि घ र फर्किएकी थिइन् । तर यो पा ला चाहीँ अ ण्डाको नि हुँमा उनले लोग्नेलाई छा डेर प्रे मीसँग पो इल गएरै छाडिन्।
चार महिनाअघि आफू भागेको त्यो घ’टनाका बारेमा पुलिससँग बयान दिने क्रममा ती महिलाले अण्डा खान नपाएकै कारण आफू लोग्नेसँग बेखुस भएको खुलासा गरेकी थिइन्। उनका अनुसार लोग्नेचाहिँले उनलाई अण्डा खान नदिएका कारण उनलाई निकै चित्त दु’खेको रहेछ।
गत शनिवार पनि अण्डाकै विषयमा उनको लोग्नेसँग झ’गडा पर्यो र घरबाट निस्किन्। उनका प्रेमी पनि आफ्नो घरमा नभएका कारण उनी प्रेमीसँगै पोइल गएको अनुमान गरिएको छ।